Uyabangwa unozinti we-Ajax Cape Town | News24
Uyabangwa unozinti we-Ajax Cape Town
Unozinti we-Ajax Cape Town u-Jody February.PHOTO: sourced
ABALANDELI, abaphathi be-Ajax Cape Town nabathandi bebhola eMzansi wonke, basakhungethekile ngokusanda kwenzeka nangesinqumo se-Premier Soccer League (PSL) ne-South African Football Association (Safa) sokukhahlela leliqembu ngaphandle, kodwa omunye wabadlali babo ubukeka esenhlanhleni.
Phela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule inhlangano ephethe ibhola kulelizwe iSafa kanye nePSL balahle leliqembu laseKapa ngecala lokudlalisa isikhwishikhwishi sefolosi nozalwa eZimbabwe uTendai Ndoro.
Noma beyichaza indaba kaNdoro futhi bezibeka izizathu ngaloludaba, kodwa miningi imibuzo nezizathu ezikhalisa izwe lonke.
Yize kunjalo, ezimnandi zithi unozinti ongaconsi phansi noyisithandwa sabalandeli bama-Urban Warriors uJody February kungenzeka athathwe eqenjini le-Kaizer Chiefs.
Noma-ke lamaqembu womabili engakaqiseki ngaloludaba lalonozinti , kodwa izinkomba ziyacacisa ukuthi angagcina ethathwe yiKhosi.
Kahle kahle uFebruary ugaqelwe amaqembu amakhulu aseGauteng namabili aphesheya.
Amakilabhu afana ne- KaizerChiefs, yi-Mamelodi Sundown, yi-Orlando Pirates neBidvest Wits awasabulali ubuthongo ezama ukuhlanganisa ukuze athole lonozinti.
Phela leli qembu laseNaturena (AmaKhosi) afuna lonozinti ngamehlo abomvu nje ngoba asanda kushiywa uBrilliant Khuzwayo nokade esekhathele ukuba yisekela lika Itumelenge Khune.
Phela uKhuzwayo uhluleke wancama njengabanye kwi-Chiefs ukususa noma ukuqhudelana noKhune nothathwa njengonozinti obamba kwasani nohamba phambili eMzansi wonkana.
Okubuye kulethe ithemba noma kuqinise lamahebezi ngoFebruary ukuthi uma use-Kapa, indaba yakhe isikhulunywa yonke indawo kanti nomakhelwane nezihlobo seziqalile ukumhalalisela.
Nokho yena akakafuni ukuphawula ngalolu daba ngoba usenenkontilekanama-Urban Warriors.
Uthe: “Ngiyacela ukuthi ngingaxinwa ngemibuzo ngaloludaba ngoba mina ngiwumdlali futhi angizazi izinto ezixoxwa abaphathi bamaqembu.
“Mina owami umsebenzi usenkundleni njengomdlali osenenkontileka neAjax Cape Town ,”kusho uFebruary.
Lo nozinti wakwaFebruary useke wadlalela iqembu lesizwe iBafana Bafana abangaphansi kwama-22 kanye nabangaphansi kwama-23
Kanti eqenjini elikhulu noma lamasiniya kwi-Ajax Cape Town uqale ukudlala ngonyaka ka-2014 kanti ungomunye wamadayimane avela kumajuniya aleli qembu noma ezinhlelweni zabo ezivelele eziqeqesha abadlali emazingeni aphansi.
Omunye wabaphathi be-Kaizer Chiefs oke abe nesandla esikhulu sokusayinisa abadlali abafikayo uMnuz Bobby Motaung akathandanga ukuphawula ngalolu daba.